တောဆိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဆိတ်သမင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဤဆောင်းပါးကို ဒရယ်ငယ် နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အကြံပြုထားပါသည်။ (ဆွေးနွေးရန်) ၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ကတည်းက အဆိုပြုထားသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အန်တီလုပ် (Antelope) ဟု ခေါ်တွင်သော တိရစ္ဆာန်ကို တောဆိတ်၊ ဆိတ်သမင်၊ ဆိတ်နွား၊ ဒရယ်ငယ်၊ အာဖရိကသမင် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
တောဆိတ်တို့သည် ဆိတ်နှင့် နွားများပါဝင်သည့် ‘ဗိုဗီဒီး’ မျိုးရင်းဝင် နို့တိုက်သတ္တဝါ များဖြစ်ကြသည်။ ‌တောဆိတ်များ၌ သမင်မျိုးမှာကဲ့သို့ ခွာကွဲများနှင့် ဦးချိုများရှိသည်။ သို့‌သော် ‌တောဆိတ်၏ဦးချိုသည် သမင်မျိုး၏ ဦးချိုများကဲ့သို့ ‌ခေါင်းပိတ်မဟုတ်ဘဲ ကျွဲ နွား၊ သိုးနှင့် ဆိတ်တို့၏ ဦးချိုကဲ့သို့ ‌ခေါင်းပွဖြစ်သည်။ ‌တောဆိတ်သည် စားမြုံ့ပြန်သည်။ သမင်မျိုးကဲ့သို့ ဦးချိုလည်းမလဲ‌ချေ။ ‌မွေးစက‌ပေါက်လာ‌သော ဦးချိုသည် အသက်ထက်ဆုံး ကြီးရင့်၍ တည်‌လေသည်။ အဖိုတွင်‌ရော အမတွင်ပါ ဦးချို‌ပေါက်သည်။ ‌တောဆိတ်၏ဦးချိုသည် သမင်မျိုး၏ဦးချိုကဲ့သို့ ခွလျက်လည်းမရှိ‌ချေ။ ‌ဖြောင့်၍ ချွန်လျက်‌သော် ၎င်း၊ ဝက်အူရစ်ကဲ့သို့‌သော်၎င်း၊ ‌နောက်ဘက်သို့ ‌ကောက်လျက် ‌သော်၎င်း၊ ပန်းဆွဲပန်း‌တောင်ကဲ့သို့ အထက်သို့ညီညာစွာတက်၍ ‌ကောက်လျက်‌သော်၎င်း ရှိတတ်သည်။ များစွာ‌သော ‌တောဆိတ်၏ ဦးချိုတွင် ကွင်းပုံများရှိတတ်သည်။
တောဆိတ်အဖိုကို သူတို့၏ချိုများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပြီး ထိုချိုများမှာ သမင်ချိုတို့ကဲ့သို့ တစ်နှစ်တစ်ခါလဲခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ အမြဲတမ်းရှိနေခြင်းဖြစ်ကာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဝင့်ကြွားသော မျဉ်းကွေးသဏ္ဌန် သို့မဟုတ် လိမ်ရှုပ်နေသော သဏ္ဌန်ရှိတတ်သည်။
ကမ္ဘာ‌ဟောင်းတွင် ‌တောဆိတ်အမျိုးကွဲ‌ပေါင်း ၁၀⁠၀ ‌ကျော်မျှ ရှိသည်။ ထိုအနက် အနည်းဆုံး အမျိုး‌ပေါင်း ၉၀ သည် အာဖရိကတိုက်တွင် မူရင်း‌ဒေသအဖြစ် ‌နေထိုင်ကြသည်။ ထို‌တောဆိတ်မျိုး အားလုံးလိုလိုသည် လွင်ပြင်များတွင်‌နေကြ သည်။ ‌တောဆိတ်တို့သည် ခြင်္သေ့၊ ကျားသစ်နှင့် ‌တောလိုက်ခွေးများလိုက်လျှင် အလွန်လျင်မြန်စွာ ‌ပြေးလွှားနိုင်ကြသည်။ ယင်းတို့၏ ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လည်း ဦးချိုမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာမျှ မရှိ‌ချေ။ လျင်မြန်စွာ ‌ပြေးနိုင်‌သော ‌ကြောင့်သာလျှင် သားရဲတို့‌ဘေးမှ လွတ်‌မြောက်နိုင် ကြ‌ပေသည်။
အလွန်သေးငယ်သော တော်ဝင်ဒရယ်ငယ် မှသည် နွားသိုးနှင့်တူသော အီလန်တောဆိတ် (Elands) အထိ အမျိုးမျိုး ရှိကြသည်။ ‌တောဆိတ်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၉၁မျိုး ရှိပြီး ယင်းအနက် အများစုကို အာဖရိကတိုက်တွင် တွေ့ရသည်။
↑ Weinberg, P., Jdeidi, T., Masseti, M., Nader, I., de Smet, K. & Cuzin, F. (2008). Capra aegagrus. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 31 March 2009. Database entry includesabrief justification of why this species is of vulnerable.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောဆိတ်&oldid=527962" မှ ရယူရန်
၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ မှ ပေါင်းစပ်ရမည့် ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၀၂:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။